नयाँ शक्तिका कार्यकर्ता भन्छन्– हरेश खाएका छैनौं
जेठ ३०, २०७५| प्रकाशित २०:०८
काठमाडौं– नयाँ शक्ति नेपाल स्थापना भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ। ०७३ जेठ ३० गते काठमाडौंको दशरथ रंगशालाबाट नयाँ शक्ति पार्टीको घोषणा गरिएको थियो। यो दुई वर्षमा पार्टीले निकै आरोह अवरोह खेप्यो। मुख्यतः विकास र समृद्धिको नारालाई स्थापित गराउन यो दलले भूमिका खेल्यो। तर, चुनावी नतिजाहरु भने उसका लागि उत्साहप्रद रहेनन्। पार्टीको माथिल्लो तहमा रहेका धेरै नेताले पार्टी परित्याग गरेपछि नयाँ शक्तिको भविष्यलाई लिएर निराशा व्यक्त गर्नेहरु पनि छन्।
स्थापना दिवसकै दिन पार्टीले बुधबार काठमाडौंको एक पार्टी प्यालेसमा राष्ट्रिय युवा अभियानको विशेष संघीय भेला आयोजना गर्योन। भेलामा देशभरबाट युवाहरु सहभागी भएका छन्। उपस्थित केहीलाई नेपाल लाइभले पार्टीको दुई वर्षे यात्रालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ? धेरै नेता-कार्यकर्ताले पार्टी छोड्नुलाई कसरी लिनु भएको छ? र, यसको भविष्यप्रति कस्तो धारणा छ? भन्ने प्रश्न सोधेको छ।
तिलक जोशी, कञ्चनपुर
हिजोका दिनमा जुन उत्साहका साथ यो पार्टीको स्थापना भयो। त्यसपछिका दिनमा यहाँ आशा र निराशा दुवै देखिए। बीचमा धेरैले पार्टी छाडे पनि। माओवादीबाट आएका र अन्यत्रबाट आएकाहरुले पनि पार्टी छाडे। त्यसले केही निराशा उत्पन्न गरे पनि वास्तवमा उहाँहरु केही ढिला जानुभयो। जानुपर्नेहरु अघि नै जानुपर्थ्यो।
तर, अहिले युवाले यो पार्टी सम्हालेका छन्। युवाको काँधमा यो पार्टीको जिम्मेवारी आएको छ। त्यसले केही नयाँ आशा उत्पन्न गरेको छ। पार्टीले अब फड्को मार्ने सम्भावना पनि देखाएको छ।
हिजोका दिनमा पार्टीलाई लथालिंग पारे र निहित स्वार्थमा चलाउन खोजे, आफू छ भने मात्रै सबैचिज छ नभए केही छैन भन्ने वातावरण सिर्जना गरे, ती सबै प्रवृत्तिको अन्त्य भएको छ। अहिले युवाको यति ठूलो जमात देखिइरहेको छ, यसले पार्टीको नयाँ उचाइको संकेत गर्छ।
सरस्वती सिंखडा, धादिङ
नयाँ शक्ति दुई-चार वर्षमा बनिहाल्ला भनेर हामीले सोचेका थिएनौं। यो बन्न धेरै समय लाग्न सक्छ। संघर्ष गर्नुपर्छ। जे होस्, झन् पछि झन् यो पार्टी राम्रो हुँदै गएको छ, बन्दै गएको छ।
पार्टी छाडेर जानेहरुप्रति कुनै गुनासो छैन। ती अवसर खोज्न आएका थिए, नपाएपछि गए। आफूले केही पाउनुपर्छ भन्नेहरु नपाएपछि गएका हुन्। जो पार्टी बनाउनुपर्छ, जनताका लागि केही गर्नुपर्छ, देशका लागि केही गर्नुपर्छ भनेर यो पार्टीमा आएका थिए, ती अहिले पनि यहीँ छन्।
देशमा अहिले तेस्रो राजनितक शक्ति आवश्यक छ। यो जनताले नै महसुस गरेको कुरा हो। अहिले वाम गठबन्धनले जनतालाई के गर्यो , के दियो? हिजो के बोलेका थिए, आज के गरिरहेका छन्? महँगी र भ्रष्टाचारभन्दा बाहेक देशमा अरु के बढिरहेको छ र? यस्तो बेलामा तेस्रो शक्ति आवश्यक छ र हाम्रो पार्टी त्यो शक्ति बन्छ भन्ने म प्रशस्त आधार देख्छु।
पार्टी स्थापना भएको दुई वर्षमा विभिन्न उतारचढाव देखियो। पार्टी राम्रोसँग बनिनसक्दै यहाँ वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेका पुराना शक्तिसँग तुरुन्तै चुनावमा होमिनुपरेकाले हामीले सुखद नतिजा ल्याउन सकेनौं। यद्यपि, हामीले हरेश खाएका छैनौं। धेरै साथीहरुले पार्टी छाड्नुभएको छ। तर, युवाहरु यो पार्टी जोगाउन लागिपरेका छौं।
हाम्रो अवस्था यही कार्यक्रम हलमा आएका मानिसको संख्याले पनि देखाउँछ। दुई तिहाइ मतको वाम सरकार भएको बेलामा त्यताको अवसरलाई छाडेर यही पार्टी बनाउनुपर्छ भनेर नयाँ शक्तिमा रहेका यी युवाको संख्या नै हाम्रो भविष्य हो। यो हाम्रा लागि गर्वको कुरा हो। शक्तिको पछि लाग्नेहरु धेरै हुन्छन्, सत्यको पछाडि लाग्नेहरु कम हुन्छन्। यहाँ उपस्थितहरु सबै सत्यका पछि लाग्नेहरु हुन्। देशै बनाउने हो भने यो पार्टीमा लाग्न कुनै अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने अवस्था छैन।
कमल आचार्य, इटहरी
नयाँ शक्ति पार्टीले दुई वर्ष पूरा गरेकोमा निकै खुसी लागिरहेको छ। नयाँ शक्ति पार्टी आगामी दिनमा पुरातन सोचहरु त्यागेर नयाँ सोच, नयाँ सिद्धान्त र नयाँ परिपाटी राखेर देशलाई समृद्ध बनाउन अघि बढ्नेछ। आफ्नै जीवनकालमा समृद्धि हेरेर मर्ने सबैको इच्छा पूरा गर्न संकल्पित हुनेछ। यो देशलाई समृद्ध बनाउन हामीले राखेका पाँच 'स'को अवधारणालाई पछ्याउनु आवश्यक छ।
नयाँ शक्तिले दुई वर्षमा निकै तीतोमीठो अनुभव हासिल गर्योय। हामीले भर्खरै पार्टी गठन हुँदै गर्दा चुनावमा सहभागी हुनुपर्यो । हामीले चुनाव चिह्न समेत नपाई चुनावमा सहभागी हुनुपर्योग। नयाँ पार्टीमाथि यस्तो अन्याय भएकैले चुनावी नतिजा उत्साहप्रद रहन सकेन।
हामीले जनतालाई राम्रोसँग हाम्रो एजेन्डा र नीति बुझाउन नसक्दा पनि राम्रो नतिजा ल्याउन सकेनौं। तर, अब आउने चुनावमा हामी बलियो हुनेछौं भन्ने विश्वास छ। हामी जनताले दैनिक भोगिरहेका पीरमर्कालाई उठाएर उनीहरुको विश्वास जित्दै जानेछौं। अबको पाँच वर्षमा जनता माझ भिज्नेछौं।
यो दुई वर्षमा हामीले धेरै अनुभवहरु गर्यौंप। विशेषगरी धेरैले पार्टी छाडेको कुरा चर्चित छ। तर, सुन्दर फूललाई कुरुप बनाउन झिँगाहरु भन्किएका थिए, ती झिँगा हट्दाखेरीको अवस्थामा हाम्रो पार्टी पुगेको थियो। अब यसलाई अझै सुन्दर बनाउन मौरीहरुले घेरेको अवस्था छ।
नयाँ शक्ति अब बन्दैन, सकियो भन्नेहरुलाई पनि हामीले देखाइदिनेछौं कि यो पार्टी बन्दै छ। अहिलेको वाम सरकारले जनतालाई थोपरेको महँगीलाई नयाँ शक्तिले अन्त्य गराउन पहल गर्छ।
कल्पना कोइराला, जोरपाटी
पार्टी सुरुमा राम्रै भएको थियो, माहोल पनि राम्रै देखिएको थियो। बीचमा फेरि निराश भइसकेका थियौं हामी। निस्क्रिय पनि भइसकेका थियौं। तर, पार्टी नै छाडेका भने थिएनौं। झिनो आशा बोकेर बसेका थियौं। अहिले आएर आशा फेरि बढेको छ। अब हामी अगाडि बढ्न सक्छौं भन्ने विश्वास बढेको छ। यो पार्टी अब ठूलो भएर जानेछ।
अहिले धेरैले आशा गरेको वाम गठबन्धनले पनि खासै केही गर्न सक्लाजस्तो छैन। उनीहरुको प्रारम्भिक कामले जनतामा आशा जगाउन सकेको छैन। त्यसले पनि विकल्पमा नयाँ शक्ति उदाउनेछ भन्ने लागेको छ।
कल्पना विक, नेपालगञ्ज
म नयाँ शक्तिमा जोडिएको धेरै भएको छैन। योसँग नयाँ खालको योजना छन्, युवाहरुलाई आकर्षित गरिरहेको छ। त्यसैले पनि मलाई यो पार्टीप्रति आकर्षण बढेको हो।
दुई वर्षअघि हामीले यो पार्टी जस्तो होला भन्ने सोचेका थियौं, त्यस्तो भइसकेको छैन। बीचमा बाधाहरु आउँछन्, तर हामी विस्तारै अघि बढिरहेका छौं। सुरुमा हामीले यो पार्टीमा जोडिँदै गर्दा धेरैबाट धेरै अपेक्षा गरेका थियौं। तर, धेरैको सहयोग पाएका छैनौं।
हुन त नयाँ शक्ति नेपालले अहिलेसम्म कुनै उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन। तर, गर्नका लागि हामी लागिपरिरहेका छौं। सबै काम तत्काल भइहाल्छ भन्ने होइन। एउटा भर्खर जन्मेको बच्चालाई हिँड्नका लागि त केही वर्ष कुर्नुपर्छ। यो त झन् पार्टी हो। त्यसैले केही वर्ष लाग्ला तर यो पार्टी बन्न चाहिँ बन्छ।
यो पार्टीको भविष्य राम्रो नै हुनेमा म विश्वस्त छु। नत्र बाबुराम भट्टराई जस्ता देश दुनियाँ बुझेका नेता किन यतातिर लागिरहनुहुन्थ्यो र? उहाँका लागि त अन्य अवसर पनि थिए नि!